Fahad Yaasiin Oo Balanta Uga Baxay Farmaajo! – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Fahad Yaasiin Oo Balanta Uga Baxay Farmaajo!
Tuuryare 13 March 2019
Agaasimaha Hay’adda sirdoonka Qaranka ee NISA Fahad Yaasiin ayaa Kismaayo u tagay si uu Madaxweynaha Jubaland
Axmed Maxamed Islaam uga dhaadhiciyo heshiis toos ah oo uu la galo, si talo ay ugu yeeshaan xildhibaanadda Jubaland ee lasoo xulayo kahor doorashada Madaxtinimada Jubaland.
Ujeedada laga leeyahay ayaa ah in xildhibaanada Federalka ah ee kasoo bixi doona 2020 ka Jubaland ay noqdaan kuwa xukuumadda taageersan, si loo suuragaliyo in Kheyre oo hadda Ra’iisul wasaare ah uu Musharax Madaxweyne, guushana ay raacdo isaga.
Fahad ayaa xiriirkii wada shaqeyneyd u jaray Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isagoo si cad ugu sheegay Fahad, in Farmaajo aan dib loo dooraneyn oo uusan Musharax noqon karin, farmaajo waa uu ka biya diiday warkaas.
Kulan bishan billowgeedii ka dhacay Xaafiiska ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre waxaa heshiis wada shaqeyn ku kala saxiixday Fahad iyo Kheyre, iyagoo isku af gartay in Farmaajo ayka daneystaan oo ay ka shaqeeyaan sidii kheyre uu Madaxweyne u noqon lahaa 2020 ka.
Fahad ayaa ku dadaalaya sidii lacagta u badan ee Qatar laga qaadayo, uu Musharax ugu noqon lahaa Xasan cali Kheyre oo hadda ku dadaalaya in xiriirka Villa Somalia mid ka duwan uu la yeesho Maamul goboleedyadda.
Somalia: UN backed soldiers hit by explosion near Mogadishu
Madaxweynaha Maamulka KG oo gaaray Diinsoor